नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने भन्दै चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको प्रदर्शन [फोटो फिचर] नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न नपाएको भन्दै चीनमा एमबिबिएस अध्ययन गरेका सन् २०१५ र २०१६ ब्याचका विद्यार्थीहरुले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। शुक्रबार, असोज ८, २०७८
कोभिड नियन्त्रणमा खटिएका डा अवस्थीको अनुभव– संघीयताले महामारी व्यवस्थापनमा समस्या देखियो देश अहिले बिना भर्‍याङको तिन तले घर जस्तै हो। हालकै अवस्था कायम रहे र समन्वयको अभाव भइरहे स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उनको बुझाइ छ। शुक्रबार, असोज ८, २०७८
बिरामीलाई सहज हुने ठाउँमा सारियो शुक्रराज अस्पतालको फार्मेसी (फोटो फिचर) बिरामीलाई सहज हुने ठाउँमा फार्मेसी सारिएको छ। पहिले कुनामा रहेको फार्मेसी अहिले अस्पताल छिर्नेबित्तिकै देखिन्छ। शनिबार, भदौ १९, २०७८
खाली हुँदै शुक्रराज अस्पतालको शय्या [फोटो फिचर] टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालको इमर्जेन्सीमा कोभिडका लागि ४० शय्या छुट्याइएको छ। तर, शुक्रबार मध्याह्नसम्म चार वटा शय्यामा मात्र कोभिडका बिरामी छन्। बाँकी ३६ शय्या खाली छन्। शुक्रबार, भदौ १८, २०७८
असनको भिड: कोरोना भन्छ- ‘भित्र बस’, भोक भन्छ- ‘बाहिर जाऊ’ असन, जमल, इन्द्रचोकजस्ता क्षेत्रमा जानु मानिसहरुको बाध्यता भएको उनी बताउँछन्। त्यहाँ व्यापारी मात्र होइन, भरिया, रिक्सा चालक, ठेलावालालगायत सर्वसाधारण आउँछन्। ती सबै जोखिममा रहेको विकले बताए। शनिबार, भदौ १२, २०७८
डा अमृतले देखेको ग्रामीण स्वास्थ्य समस्याः बिरामीको भाषा नबुझ्नेदेखि आक्रमणसम्म सुदूरपश्चिमको दुर्गम जिल्ला डडेल्धुरा र गण्डकी प्रदेशको बेनीमा करिब ३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा खटिएका डा अमृत अहिले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्दैछन्। शनिबार, साउन ३०, २०७८
‘तपाईंको मास्क खोई?’ भन्दै यसरी वितरण गरियो मास्क [फोटो फिचर] प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उक्त अभियानमा वैशाख ६ यता सात लाख चार हजार ३७६ जनालाई मास्क वितरण गरी सकिएको छ। शुक्रबार, साउन २९, २०७८
शुक्रराज अस्पतालमा खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न जानेको भीड उस्तै (फोटो फिचर) विशेषगरी विदेश जाने नागरिकहरु खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। खोप कार्ड प्रमाणीकरणका लागि शुक्रराज अस्पताल पुग्नेहरुको भीडभाड अझै पनि बाक्लै छ। त्यो बाक्लो भीड अस्पतालको मूल गेट बाहिर पुगेको छ। सोमबार, साउन २५, २०७८
नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको नीति, के भन्छन् उत्पादक? विश्वका केही राष्ट्रहरुले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बनाइरहँदा नेपालमा भने यसको संभावना बारे बल्ल चर्चा सुरु हुँदैछ। नेपालमा खोपको संभावना बारे चासो धेरैको देखिन्छ, तर आँट भने कसैले गर्न सकेका छैनन्। आइतबार, साउन २४, २०७८
'घर जाने बित्तिकै छोरीलाई अँगालोमा लिउँ जस्तो हुन्छ, तर सक्दिन' अस्पतालले आफूहरुलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरु उपलब्ध गराएको उनले बताइन्। प्रसूति गृह अस्पतालमा उनी सहित हाल ९५ जना सरसफाईकर्मी छन्। जसमध्ये ९० जना महिला र बाँकी पुरुष रहेको अस्पतालले जनाएको छ। आइतबार, असार २०, २०७८
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुधारको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन (फोटो फिचर) बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भइरहेको अनियमितता तथा बेथिति सुधारको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ। शनिबार, असार १९, २०७८
‘बिरामीले खुट्टा समातेर रोएको त्यो पल कहिल्यै बिर्सन सक्दिन’ डा दीपक गुप्ता कोरोना महामारीमा पहिलो लहरदेखि नै खटिरहेका छन्। पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा आएका सबै किसिमका उतारचढावसँग साक्षात्कार हुने मौका उनले पाए। शुक्रबार, असार १८, २०७८
यस्तो छ थाइराइडबारे भ्रम र यथार्थ थाइराइडका कारण अरु धेरै रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। कतिपय रोगले त हाम्रो जीवन नै जोखिममा पार्ने अवस्था रहन्छ। थाइराइडको गडबडीका कारण कतिपय अवस्थामा बिरामी ‘म्यासिडेमा कोमा’ को अवस्थामा पुग्न सक्छ। बिहीबार, असार १७, २०७८
एमबिबिएस पढ्दै गरेका दीपकिरणको कथाः रोगले बुवा गुमाए, बाढीले घर–खेत छात्रबृत्तिमा चीनको मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पढ्दै गरेका उनलाई घर बनाउँदा र भाइको पढाइ खर्चको ऋणको भारी छ। तर, उनले आफ्नो मनलाई सम्हाल्दै आएका छन्। सोमबार, असार ७, २०७८
फोटो कथा : दुरदराजमा खोप कसरी पुर्‍याइन्छ? मुस्ताङ र गत वर्ष सुर्खेतमा देखिएका यी दुई दृष्यले नेपालको दुर्गम ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीले कसरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन् भन्ने उदाहरण दिएको छ। सोमबार, असार ७, २०७८
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा छैनन् चिकित्सक, मेलम्ची र हेलम्बुमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित स्वास्थ्य कार्यालयले मेलम्चीमा तीन जना चिकित्सक सहित ६२ जना, हेलम्बुमा चिकित्सक बाहेक ४७ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु परिचालित गरिएको उनले बताए। सोमबार, असार ७, २०७८
बालबालिकालाई ‘जंक फुड’को लतबाट छुटाउने अवसर यदि कुनै बच्चा जंक फुडमात्रै खान खोज्छ अथवा यस्ता खानेकुराको लत उसमा बसिसकेको छ भने उसको शरीरमा तत्काल देखिने असर र दीर्घकालीन असरहरू पर्नसक्छ। शुक्रबार, असार ४, २०७८
इन्टरनेट दुनियाँमा मात्रै बानी पर्ने समस्या ‘इन्टरनेट डिपेन्डेन्सी डिस्अर्डर’ बढ्दै यसरी इन्टरनेट या ‘भर्चुअल’ दुनियाँमा मात्रै बानी पर्ने समस्यालाई ‘इन्टरनेट डिपेन्डेन्सी डिस्अर्डर’ भनिन्छ। बस्नेतले भने, ‘इन्टरनेट डिपेन्डेन्सी डिस्अर्डर बालबालिकाले लगातार एक हप्ता इन्टरनेट चलाउँदैमा हुन्छ। यसलाई इन्टरनेट एडिक्सन डिस्अर्डर पनि भनिन्छ।’ बिहीबार, असार ३, २०७८
बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा कसरी प्रदान गरिन्छ स्वास्थ्य सेवा? कोरोनासँगै झाडापखाला, आउँ, हैजा लगायत पानीजन्य रोगको फैलन सक्ने खतरा बढेको छ। मानिसहरुको भीडभाड बढे कोभिड संक्रमणको जोखिम पनि बढ्न सक्छ। पानीका मुहान दूषित हुने भएकाले पानीजन्य रोग फैलन सक्ने। बुधबार, असार २, २०७८
संक्रमित श्रीमती निको भएपछि सुरतको मुहारमा फर्कियो खुसी, अस्पताललाई गरे आर्थिक सहयोग समाजसेवी सुरत भुलले न्याय हेल्थ नेपाल बयालपाटा अस्पतालले आफ्नो श्रीमतीलाई दोस्रो जीवन दिएको भन्दै आइतबार घर फर्किने बेला अस्पताललाई ५१ हजार ५ सय ५५ रुपयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन्। सोमबार, जेठ ३, २०७८
कोरोना जित्नेको सन्देश: हौसला र आत्मबल कोरोना जित्ने औषधि हो कोरोनासँग लडिरहनुका भएका सबैलाई नआत्तिन म आग्रह गर्दछु। मनोबल उच्च बढाउनुहोस्। खानपीनमा जोड दिनुहोस्। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने बित्तिकै तत्काल अस्पताल जानुपर्छ। घरमै बसिरहनु हुँदैन। आइतबार, जेठ २, २०७८